Xildhibaan Nuur Siidow oo Baarlamaanka u sheegay in dadka ku nool degmada Awdheegle ay u baahanyihiin kaalmo Caafimaad – Kalfadhi
Xildhibaan Nuur Siidow oo Baarlamaanka u sheegay in dadka ku nool degmada Awdheegle ay u baahanyihiin kaalmo Caafimaad
Xildhibaan Nuur Siidow oo kamid ah golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo shalay ka qeyb-gallay doodii xildhibaannada ee Sharciga Dowladda iyo Aas-aas-ka hay’addaha Dowladda, ayaa sheegay in dhibaatooyin caafimaad ay ka taaganyihiin degmadda Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Xildhibaanka oo hoggaaminaya wafdi ayaa horraantii bishii Sep ee sanadkan booqasho ku tegay degmadda Awdheegle, waxaana ay kulamo la qaateen dadka deegaanka Awdheegle ku nool.
“Waxaa lagu jiraa xili roobaa waa wahtiga ay kaneecadu ay dadka ku soo kacdo”, ayuu yiri.
Waxaa kale oo uu carabka ku adkeeyay in shacabka iyo ciidanka degmadaasi ku nool in ay go’doon ku jiraan, ayna xaq u leeyihiin in dowladda ay ka helaan taageero.
Shalay oo ay taariikhdu ku beegneyd 18-ka bisha Nov waxaa degmadda Awdheegle booqday wafdi heer wasiiro ah oo ay hoggaamineysay wasiiradda Caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
Degmadda Awdheegle ayaa kamid ah deegaannadii dhawaan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay kala waregeen kooxda al Shabaab, waxaana tan iyo markii ciidanka ay galeen degmaddasi laga soo sheegayaa xaaladdo aad u xun madaama ay kooxda go’doon ka dhigtay degmadda.
Xildhibaan Cosoble “Madaxweyne Farmaajo waxaan uga fadhinaa inuu raali gelin ka bixiyo isku daygii dilka ahaa ama sidey wax u dheceen la cadeeyo”
Shirka ka wada tashiga hindise sharciyadeedka shirkadaha dalka oo lagu soo gaba-gabeeyay Garoowe